အခြား ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ မီးအိမ် လုပ်ငန်းရှင်များ - China Other explosion-proof lamps ပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
BGD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မြင့်မားသောတိုင်မီးအိမ်
3. II A, IIB, II C ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ atmo-spheres များတွင် အသုံးချနိုင်သည်။
2. အလင်းရောင် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ပြုပြင်မွမ်းမံရေး ပရောဂျက်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးရန် ခက်ခဲသော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
ABSg စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ တင့်ကားစစ်ဆေးရေး မီးအိမ်
1. ဒေသန္တရ မီးထွန်းရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော နေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခြင်း၊
AD62 စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ မီးအိမ်
3. ပေါက်ကွဲသောလေထု- အတန်း ⅡA၊ⅡB၊ ⅡC
5. မြင့်မားသောအကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ၊ စိုစွတ်သောနေရာများအတွက်သင့်လျော်သော;
BHZD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လေယာဉ်မှ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် မီးအိမ်